शिक्षा के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ? - स्वयं सहायता संसाधन | स्वयं सहायता संसाधन
"शिक्षाले संसारलाई परिवर्तन गर्दैन, यसले व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्दछ जसले संसार परिवर्तन गर्दछ" पाउलो फ्रेरे। शिक्षा बिना भविष्य छैन, सबैको लागि एक राम्रो, अधिक दिगो, सहयोगी र निष्पक्ष संसारको आशा छ, यो उनीहरूले प्राप्त गरेको शिक्षामा निर्भर गर्दछ मानिसहरु अब यो बसोबास गर्ने। आजका बच्चाहरू भोलि नेताहरू हुन्, र उनीहरूबाट सिक्नु भन्दा गल्तीहरूको लागि उत्तम उपाय अरू छैन।
धेरै व्यक्तिहरूको लागि, शिक्षा भनेको बच्चाहरूको कुरा हो, बाल्यावस्थासँग सम्बन्धित शब्द जुन वयस्कताको जिम्मेवारीहरू आइपुग्दा अर्थमा बन्द हुन्छ। तर सत्यबाट अरु केहि हुन सक्दैन किनकि ज्ञान जन्मजात हुँदैन, कोही पनि जन्मेको कारण थाहा पाउँदैनन्। तसर्थ, बच्चाहरूको शिक्षा मानिसहरुको शिक्षामा निर्भर गर्दछ जो उनीहरूको शिक्षणको जिम्मामा छन्, र यो एक सम्मोहक कारण हो कि सुधार, सिक्न र अज्ञात धेरै चीजहरू अन्वेषण नगर्न। किनकि तपाईं पनि राम्रो बुबा वा आमा हुन सिक्नुहुन्छ।
तपाई नयाँ कुरा सिक्न कहिल्यै उमेर हुनुहुन्न र यो सुधार गर्न समय, प्रयास र पैसा शिक्षा र व्यक्तिगत बृद्धि गर्न कहिले ढिलो हुँदैन। तर यो स्वीकार्नु पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफैले त्यो लगानीको योग्य हुनुहुन्छ, किनकि धेरै चोटि तपाईले अरुको बारेमा यति धेरै सोच्नुहुन्छ कि तपाई आफैंको हेरचाह गर्न बिर्सनु हुन्छ। नयाँ चीजहरू सिक्नु भनेको तपाईंलाई आफ्नो व्यावसायिक मार्गमा सहयोग गर्दछ, तर तपाईंको भित्री मार्गमा पनि चीजहरूको ज्ञान र तपाईंको आफ्नै व्यक्तिगत विकासमा।
शिक्षा भनेको बौद्धिक, भावनात्मक र नैतिक क्षमता विकासको लक्ष्यको साथ एक व्यक्तिलाई ज्ञानको प्रसारण हो। भन्नु पर्ने हो, यो केवल ड्याडेक्टिक ज्ञान सीख्नेको बारेमा मात्र होईन, जसले विभिन्न कामहरूलाई बढी वा कम सीपले सम्पन्न गर्दछ। मूल्यमान्यताको विकासका लागि शिक्षा आवश्यक छ यसले हामीलाई समाजमा बाँच्न अनुमति दिन्छ, समानुभूतिसहित, एकता र अन्य जीवित प्राणीहरूको सम्मान गर्दछ।
र यी सबै तपाइँ तपाइँको जीवन भर विकास गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने ज्ञान को अधिग्रहण एक लामो दूरी को क्यारियर हो। शिक्षालाई जीवन योजनाको रूपमा लिनुपर्दछ, किनकि सँधै, कुनै पनि समयमा मार्गमा, तपाईं तालिम दिन र नयाँ चीजहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। अरु के छ त, आफ्नो प्रशिक्षण सुधार तपाईं आफैलाई नवीकरण गर्न अनुमति दिनेछ, तपाइँको ज्ञानलाई रिसायकल गर्नुहोस् र तपाइँ आफैंलाई त्यो खुशी प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ जुन एक क्षेत्र मा पेशेवर विकासको लागि तयार गर्नुहोस् जुन सधैं उपलब्ध हुँदैन।
शिक्षाको क्षेत्रमा अवसरहरू अनन्त छन्। यो तपाइँको सबै प्रयासहरू एकल बिन्दुमा केन्द्रित गर्ने, वा तपाइँका क्षमताहरू सीमित गर्ने बारेमा होइन। यो एक भन्दा बढि चीज थाहा पाउनुको सवाल होइन, किनभने धेरैबाट सिक्नु पनि तपाईको दिमाग खेती गर्नु हो। तसर्थ, शब्दको व्यापक अर्थमा शिक्षालाई समर्पित यस सेक्सनमा, तपाईं आफ्नो शिक्षा सुधार गर्न सक्ने किसिमको विभिन्न प्रकारको शिक्षा पाउन सक्नुहुनेछ।
हामी तपाईंको अभिव्यक्ति सुधार गर्ने तरिकाहरूको लागि खोजी र विकास गर्दछौं। पनी बिभिन्न सीखाहरु पनि तिनीहरूले तपाइँको व्यक्तिगत विकास को बाटो मा तपाइँलाई मद्दत गर्दछ। हामी अवसरहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौं, किनकि त्यो के शिक्षामा आधारित छ, अपेक्षाहरू सुधार गर्दै र अवसरहरू विस्तार गर्दै जुन बाटोमा देखा पर्दछ।
र त्यसोभए तपाईंले ती सबै जानकारीको खोजीमा समय र प्रयास खर्च गर्नुपर्दैन, शिक्षाको यस सेक्सनमा तपाईंले सबै प्रकारका विकल्पहरू फेला पार्नुहुनेछ जुन तपाइँको ज्ञान विस्तार गर्न को लागी। दुबै भावनात्मक तहमा, साथै सामाजिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक स्तर र सबैमा, जुन अन्तत: तपाईंलाई तपाईंको शिक्षा जारी राख्न र सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
किनभने तपाईं, तपाईंको शिक्षा र प्रशिक्षणमा लगानी गर्नुहोस्, यो मात्र आवश्यक छैन, तर यो तपाईंको आफ्नै व्यक्तिगत विकासको लागि मौलिक छ। र यो साधारण आर्थिक लगानी हुनु हुँदैन, किनभने तपाईले आफ्नो लागि र भविष्यको लागि बनाउन सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी तपाईको व्यक्तिगत समर्पण हो।
अ English्ग्रेजी सिक्नु केही तरिकामा तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, शब्दावली याद गर्ने वा व्याकरण सिक्ने, यी प्रश्नहरू हुन् जुनसँग ...
"यो कृतज्ञ हुनको लागि राम्रो गरी जन्मेको छ" लोकप्रिय हितोपदेश भन्छ, र यो एक धेरै ठूलो सत्य हो जुन हामीले बिर्सनु हुँदैन ...
Correos 2020/2021 प्रतियोगिताहरू: यी दर्ता गर्न मितिहरू छन्
आज प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरू स्थिर रोजगार पाउनको लागि एक तरीका भएको छ। यद्यपि यी विशेषताहरू ...
यदि तपाईंले दर्शन र मनोविज्ञानको बारेमा सोच्न कहिल्यै रोक्नुभयो भने, तिनीहरू एक अर्का भन्दा फरक छन् तर ...
कसरी एउटा निष्कर्ष सुरू गर्ने
जब तपाईंले भर्खर एउटा काम गर्नुभयो वा कुनै पनि प्रकारको लेखन, राम्रो निष्कर्षमा पुग्न सजिलो छैन। को लागि ...
Neologism के हो
के तपाईंलाई थाहा छ neologism के हो? हुनसक्छ तपाईंले यो सुन्नुभयो र तिनीहरूलाई वास्तवमै के हो भनेर थाहा बिना नै तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। को लागि ...
रूपकहरू के हुन् र तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने
रूपक व्यापक रूपमा स्पेनिशमा प्रयोग गरिन्छ र ती पनि धेरै उपयोगी छन्। क्यास्टिलियन वा स्पेनिश एकदमै ...
खुला प्रश्नहरूको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्
जब हामी खुला प्रश्नहरूको बारेमा कुरा गर्छौं, यो बन्द प्रश्नहरु संग केहि गर्न को लागी गरीन्छ। बन्द प्रश्नहरू सोध्दा, सामान्यतया ...
भावनाहरू कसरी प्रबन्ध गर्ने
आफ्ना भावनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि तिनीहरू तपाईंलाई नियन्त्रण गर्नेहरू होइनन्। सायद यसमा ...
प्राथमिक, माध्यमिक र तृतीयक गतिविधिहरू
देशको आर्थिक गतिविधिहरू तिनीहरूको उद्देश्य अनुसार वर्गीकृत गरिएको छ, ताकि तपाईं तीन प्रकारका फेला पार्न सक्नुहुनेछ ...
यस्तो देखिन्छ कि तपाईले विचार गर्नुभयो कि अनुसन्धान विधिको कार्यान्वयन केवल वैज्ञानिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ, तथापि, ...
Sci२ वैज्ञानिक तरिकाले प्रमाणित युक्तिहरू अझ राम्रोसँग अध्ययन गर्न (र द्रुत)
भाषाका सबै प्रकारहरू के हुन्
ग्यालिलियो ग्यालिलिलेका योगदानहरू के थिए?
विश्लेषणात्मक विधि के हो? विशेषताहरु, नियमहरु, वर्गीकरण र अधिक
गैर-ध्रुव कोवलन्ट बन्धनको विशेषता र गुणहरू
टेक्निकलिटी के हो? परिभाषा, कथाहरू र उदाहरणहरू
भूगोलका शाखाहरू के हुन् भनेर जान्नुहोस्
Synoptic तालिका को विशेषताहरु र कार्यहरु
अनुभवजन्य समाधानहरू के हुन्? प्रकार, गुण र उदाहरण
साझा विकास के हो? लक्ष्य, सकारात्मक र नकारात्मक
Lamarck रूपान्तरण को सिद्धान्त के हो?
वास्तविक संख्या को वर्गीकरण के हो?
मोनोग्राफिक पाठ: विशेषताहरू, प्रकारहरू, प्रकार्यहरू र संरचनाहरू
जनावरको कोष भनेको के हो? - संरचना, भाग र कार्यहरू
वैज्ञानिक विधिका चरणहरू: तिनीहरू के हुन्, परिभाषा र तिनीहरूलाई कसरी गर्ने
सामयिक वाक्य - अर्थ, उद्देश्य, प्रकार र उदाहरण
क्षेत्र अनुसन्धान के हो - चरणहरू, विशेषता र प्रविधिहरू
१ 16 विभिन्न प्रकारका पाठहरू के हुन्?